कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता : नयाँ पालुवा – Upahar Khabar
कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता : नयाँ पालुवा
प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०७८, मंगलवार २१:०९ September 14, 2021
यतिबेला हाम्रो मुलुक इतिहासकै सबै भन्दा अप्ठेरो मोडमा आइपुगेको यर्थाथबाट पक्कै पनि साथीहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न । इतिहासमा यस्ता अप्ठेरा मोडहरु नआएका होइनन् । हाम्रा वीर पुर्खाहरुले जटिल अवस्थाबाट पार लगाउँदै नेपालको अस्तित्व जोगाए ।
अहिलेको कठिन मोडबाट पार लगाउने दायित्व हाम्रो पुस्ताको हो । हाम्रो पुस्तालाई इतिहासले ठूलो परीक्षणको घडीमा उतारेको छ । हामी संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौं । कठिन मोडबाट मुलुकलाई जोगाउने दायित्व राजनीतिकदलहरुकै हो । मुलुकमा धेरै राजनीतिकदलहरु छन् । तर नेपाली कांग्रेस बाहेक कुनै पनि दलहरु देश र जनताप्रति इमान्दार भएनन् । यो आरोप मात्रै होइन, पटक पटक प्रमाणित भइसकेको तथ्य हो ।
मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने भनेको नेपाली कांग्रेसले मात्रै हो । विगत ७५ वर्षका राजनीतिक घटनाक्रमले यो कुरा सिद्ध गरिसकेको छ । अहिलेसम्म जनआधिकार प्राप्तिका सफल संघर्षहरु कुनै छैनन् जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नगरेको होस् । अहिलेसम्म मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जति निर्वाचन भएका छन्, ती सबै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै संभव भएका छन् ।
यो ७५ वर्षको इतिहास हेर्दा अर्को के कुरा प्रमाणित भएको छ भने , जुन बेला नेपाली कांग्रेस बलियो तथा संगठित छ , सुझबुझपूर्ण नेतृत्व छ त्यो बेला लोकतन्त्रले संकट बेहोर्नु परेको छैन । जुनबेला नेपाली कांग्रेस कमजोर तथा असंगठित छ , नेतृत्व अदुरदर्शी छ , त्यो बेला लोकतन्त्रले गम्भीर क्षति बोहोर्नु परेको छ ।
उदाहरणद्धारा नै प्रमाणित भइसकेका यी तथ्यहरुको आलोकमा यतिबेला नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिबशेन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । महाधिबशेन भनेको पार्टीको आन्तरिक जीवनको शक्रान्ति हो । जसरी बसन्त ऋतुसँगै पुराना पात झरेर नयाँ पात पलाई बोट विरुवाले नवजीवन प्राप्त गर्छन्, वर्षायममा पानीका मुहानहरुले नयाँ जीवन प्राप्त गर्छन्, त्यसैगरी महाधिबशेनबाट पनि पार्टीको नयाँ जीवन प्रारम्भ हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको आशान्न १४ औं महाधिबशेन करिव ६ वर्षको अन्तरालमा हुन गइरहेको छ । ६ वर्षको यो अवधिमा नयाँ पुस्ताका करिव २५ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । त्यो पुस्ताको मन मस्तिस्कमा बस्न सक्यो भने मात्रै नेपाली कांग्रेस जीवित रहन्छ । नयाँ पुस्ता भनेको नयाँ पालुवा हो ।
नयाँ पुस्ताको मनमा नेपाली कांग्रेस प्रति कस्तो छाप बस्ला ? भन्ने प्रश्नको छिनोफानो गर्ने भनेको आसन्न १४ औं महाधिबशेनले हो । त्यसैले हामीले १४ औं महाधिबशेनलाई केवल कर्मकाण्डका रुपमा मात्रै हे¥यौ भने धेरै ठूलो गल्ती हुनेछ । पहिलो कुरा त पार्टी भित्र हावी भएका गलत व्याक्तिहरुलाई विदा गर्दै सक्षम र इमान्दार व्याक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु अधिबशेनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा हुनु पर्छ । दोस्रो कुरा नेपाली कांग्रेस प्रतिको जनआकर्षणमा वृद्धि गर्नु पर्छ ।
हामीले जानी वा नजानी यस्तो संविधान बनायौंकी नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको सरकार गठन गर्न परम्परागत भोटले पुग्ने अवस्था छैन । २०१५ सालदेखि गत आमनिर्वाचन सम्मको नजीर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस सँग परम्परागत भोट भनेको ३० देखि ३७ प्रतिशत मात्रै हो । अब ३७ प्रतिशत भोट ल्याएर संघीय संसद तथा प्रदेश संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । बहुमत बिना गठन हुने सरकारले काम गर्न सक्दैन ।
संसद तथा प्रदेश संसदमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्धारा हुने पद्धति हामीले अवलम्वन गरेका छौं । त्यसैले जबसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भोट बैंक ४५ प्रतिशत कटाउँदैन तब सम्म बहुमतीय सरकार गठन गर्ने कल्पना नगरेपनि हुन्छ ।
अहिले भइरहेको भोट बैंकमा १० प्रशित थप्नु पर्ने चुनौतिको समाना गर्नका लागि एक मात्रै उपाय हो केन्द्रदेखि तृणमुलसम्मका संगठनहरुमा जनप्रिय नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जिम्मेवारी दिनु । जनतालाई नसताउने , जनताको पीरमर्का बुझ्ने, स्वच्छ छवि भएका सक्षम नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तलदेखि माथि सम्मका संगठनहरुमा जिम्मेवारी दिन सक्यौं भने निश्चय पनि नेपाली कांग्रेसको भोट बैंक बढ्छ । यस्तो काम जुनसुकै बेला पनि गर्न सकिँदैन । महाधिबशेनको बेलामा मात्रै यस्तो काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले १४ औं महाधिबशेनको यो पूर्वसन्ध्या हाम्रा लागि अवसर हो । यो अवशरलाई खुला दिल र ठण्डा दिमागले सदुपयोग गर्न म साथीहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।
हाम्रो आफ्नै वडाको बारेमा
राज्यको पछिल्लो संरचना अनुसारका हाम्रो मुलुकलाई सात प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरुमा विभाजन गरिएको छ । यसै गरी प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रहरु छन् ।
सात प्रदेशमध्ये वाग्मती , ७७ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ७ सय ५३ पालिका मध्ये काठमाडौं महानगरपालिका र ६ हजार ७ सय ५३ वडा मध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ वडा (हाम्रो वडा) को स्थान विशिष्ठ छ । सबै भन्दा धेरै जनसंख्या र सबै भन्दा सुसुचित नागरिकहरुको बसोबास भएको वडा मानिन्छ यो । यसैगरी प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र ( काठमाडौं–२ )लाई विशेष महत्व दिने गरिएको छ । किन बिशेष महत्व दिने गरिएको छ ? भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहन पर्दैन ।
नेपाली राजनीतिका अब्बल पात्र सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुई पटकसम्म चुनावमा पराजित गराएका यसै क्षेत्रका जनताले हो । नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध कार्यकर्ताका लागि यहाँ भन्दा लज्जा जनक नजीर अर्को हुन सक्दैन । इतिहासको त्यो कलंक पखाल्ने प्रयात्न हामीले गर्नुपर्नेछ ।
यही क्षेत्रमा चुनाव लडेर आफ्नो खुला राजनीतिक क्यारियर सुरु गरेका मदन भण्डारी एमालेका जननेताका रुपमा अमर बनेका छन् । उनको निधन पछि यही क्षेत्रबाट राजनीति क्यारियर सुरु गरेकी विद्यादेवी भण्डारी यतिबेला राष्ट्रपति छन् । यही क्षेत्रबाट चुनाव हारेको एक वर्ष वित्दा नवित्दै माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको नजीर पनि छ ।
अघि पछि टाउको गन्दा कांग्रेसै कांग्रेस देखिने तर चुनावमा कम्युनिष्टहरुले जित्ने क्षेत्रका रुपमा आम कांग्रेसजन बीच हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र दुर्नाम छ । देशकै केन्द्रमा रहेको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको संख्या उल्लेख्य छ । हरेक बर्ग , तह समुदाय , लिंगका एक से एक होनाहार नेता तथा कार्यकर्ताहरु यो निर्वाचन क्षेत्रमा छन् । तर एक आपसमा मिल्न नसक्दा सँधै कांग्रेसले चुनाव हार्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि वडा नं ३२ लाई लिउँ । क्रियाशील सदस्यहरुको संख्या मात्रै १४ सय भन्दा बढी छ । एक जना क्रियाशील सदस्यले ५ भोट होल्ड गर्ने हो भने पनि ७ हजार भोट हुन्छ । यो भोटले वडामा त सजिलै चुनाव जित्न पुुग्छ नै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि चुनाव जित्न ठूलै मद्धत पुर्याउँछ । के १ जना क्रियाशील सदस्यले कम्तिमा ५ भोट होल्ड गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न हामी सक्दैनौ मज्जाले सक्छौं । तर यसका लागि इच्छा शक्ति चाहियो । एक ढिक्का हुनु पर्यो ।
केही अपवादलाई छाडेर हाम्रो क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कुनै अवशर पाएका छैनन् सबै पिडित छन् । तर पिडितहरु पनि आफै विभाजित छन् । दर्जनौ आकांक्षीमध्ये बल्ल बल्ल एक जनाले टिकट पाउने, त्यही पनि आँफ्नै संगठन भित्रको असहयोगका कारणले हार्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेकोले हामी पीडित बनेका हौं । आफ्नो स्वार्थका लागि पनि हामी एक ढिक्का हुनु पर्ने छ । तर अर्काको स्वार्थका लागि हामी अपासमा खुट्टा तानातान गरिरहेका छौं ।
आखिर हामीलाई एक ढिक्का हुन कसले रोकेको छ ? हामीलाई खुट्टा तानातानमा कसले उतारेको छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै हामी गम्भीर हुन सकेनौ भने यस्ता अधिबशेनहरु विगतका जस्तै कर्मकाण्डमै सीमित हुनेछन् । केन्द्रमा उत्पन्न गुट र उपगुटको छाँया टोलटोलमा देखिनु भनेको ठूलो अपशकुन हो । सबै भन्दा तल्लो तहलाई गुट उपगुट मुक्त र खुट्टा तानातानमुक्त बनाउन केही प्रयास गर्न सकिन्छ की ?
‘नमस्ते पे’ मोबाइल भुक्तानी सेवा संचालनमा, यस्ता छन् सेवाहरु
टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा खसेर एक युवती बेपत्ता
Wastes in Kathmandu; challenge and opportunity
चिकित्सा शिक्षाको परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीको बिगबिगी, जेहनदार विद्यार्थी मारमा
दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण र नियन्त्रणका उपायहरू
अधुरो प्यास (यौन कथा)
भानुभक्त जोशीको निर्देशनमा ‘ठण्डाराम, तथाराम, खलास’ डेउडा गीत सार्वजनिक (भिडियो)
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु लगायतका क्षेत्रमा भारी वर्षा, मेलम्चीमा बाढीको चेतावनी
स्वतन्त्र सांसद बन्नका लागि स्नातक पास ! अरु के–के छन् मापदण्ड ?
सोवर रिह्याव सेन्टरले पायो भारतीय दुतावासले वितरण गरेको एम्बुलेन्स
अर्थमन्त्रालयले बजेटको अघिल्लो दिनको सीसीटिभी फुटेज दिन मानेन, डिलिट भएको जवाफ
क्यान्टिनकी कर्मचारी मृत भेटिएपछि बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त – भिडियो